Nezvedu | Jiangsu Egret Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
HVAC Bhora Valve
Jiangsu Egret Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Jiangsu Egret Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd. Kambani ine zvikwata zvishanu pasi: "Changzhou Egret Electric Equipment Co., Ltd., Anhui New Material Technology Co., LTD., Changzhou Xinmeixin Metal, Changzhou Meimusen Nyowani Zvishandiso "uye Changzhou Egret Kugadzira Co, Ltd iyo inonyanya kubata marudzi ebhizinesi rekutengesa kunze. Iyo kambani inowanzo kuve inobatanidzwa mune matatu makuru maindasitiri,midziyo yemumba, mota uye kutaurirana. Nepo zvigadzirwa zvayo zvikuru zviri zvekunamira matepi, furo zvigadzirwa, dzvinyiriro controllers, firiji zvikamu, alloy simbi uye pachedu ekurapwa ekudzivirira.
JIANGSU EGRET YAKABATANIDZWA KAMAKambani
Nhasi boka reEgret rakagadzirwa kuva mashanu mashanu mashanu
Changzhou Egret Electric Equipment Co, Ltd.
Yakagadzwa muna1997 muChangzhou guta, Jiangsu Province, inovhara nzvimbo ye 13,000 sequare metres, ine yakazara kuvaka nzvimbo ye 20,000 mativi akaenzana.
1.adhesive tepi akateedzana: aruminiyamu foil tepi, PE chena Tepi, PET Tepi, TPP tepi, Masking bepa tepi, Double-mativi matipi tepi, PVC tepi.
2.Thermal kuputira furo dzakateedzana: jira kana kufa-kucheka kwePU / EPDM / PE / XPE / CR / NBR Opesello, isina-yakarukwa akanzwa, silicone chipanji.
3. Pressure mutungamiriri akateedzana: compact disc mhando, SPST
Anhui Nyowani Zvinyorwa Technology Co., LTD.
Yakagadzwa muna 2021 muAnqing guta, dunhu reAnhui.
Nheyo nyowani yekugadzira yemhando dzese dzematepi ekunamatira pamwe neglue.
Changzhou Xinmeixin Simbi
Inowanikwa muguta reChangzhou, mudunhu reJiangsu.
Nyanzvi mukugadzirwa kwesimbi kufa-kukanda: zinc alloy, aluminium alloy, zvigadzirwa zvemhangura, zvigadzirwa zvesimbi, zvigadzirwa zvepurasitiki nezvimwe zvinogadzirwa zvekufa-zvekutengesa nekutengesa; Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari, mudziyo wemumba, muchina wekuwacha, mota, yekutaurirana yekubatanidza nedzimwe nzvimbo.
Changzhou Meimusen Zvishandiso Zvitsva
Inowanikwa muguta reChangzhou, mudunhu reJiangsu
Zvigadzirwa zvepamusoro: masiki ehurumende, masiki ekurapa, kupukuta, napkins
Changzhou Egret Kugadzira Co, Ltd.
kunyanya kubata mhando dzekutengesa kunze kwenyika.
Nerubatsiro rwemhando yepamusoro, EGRET yakura ikave inotungamira mhando munyika yose uye irikushandira pamwe nemhando zhinji dzefriji yepasirese, Haier, Media, Meiling, Hisense, Whirlpool, Arcelik, Vestel, Simfer, Toshiba, Beko, Samsung, LG , TCL uye nezvimwe.
YEMAHARA TAPE Partner
KUFANANA KWAKASHANDISA WOMUDZIMAI